Strategic mibvunzo: kunzwisisa uye kusarudza munyika inochinja
Chii chinonzi strategy uye ndechei? Chii chinonzi Strategic nhasi? Nzira yekunzwisisa sei nyaya dzemazuva ano dzepasirese? Nzira yekuita sei kuongororwa kwemamiriro ezvinhu? Nzira yekusarudza mune ramangwana risina chokwadi?
Vanopfuura makumi matatu hunhu, vaongorori, vadzidzisi, varapi vemibvunzo ine hunyanzvi, vanokutungamira mukufungisisa kwako nekuvimba nekongiri uye echiratidzo nyaya dzakatorwa kubva kwakasiyana siyana dzemibvunzo yehungwaru: zvakakosha zvehungwaru hwekufungisisa, mibvunzo yezvematongerwo enyika-chiuto, chiitiko chepasi rose zano, tyisidziro dzemazuva ano… Sarudzo iyi yedzidziso nemuenzaniso inoita kuti zvikwanisike kuisa mumaonero edzidziso yagara ichidzidziswa.
Kana wapedza kosi iyi, iwe uchave nekunzwisisa kuri nani kwese kwezvinhu zvakakosha kunharaunda dzedu. Iwe zvakare unozokwanisa kusiyanisa zvirinani zvinonetsa kwenguva yakareba uye zvine chekuita nenguva pfupi, kuronga pakati pezvakakosha uye zvechipiri, kunyanya muhuwandu hwakawanda hweruzivo rwatinogamuchira tese zuva nezuva, kuisa pamberi pezvido zvevatambi vakasiyana vanobatanidzwa. . Iwe unozogona kuvandudza yako wega kuverenga uye kuongorora magridi, tora inodiwa maonero pane imwe mamiriro uye woisa mumaonero kuti uite sarudzo dzakanakisa.
Strategic mibvunzo: kunzwisisa uye kusarudza munyika inochinja Zvita 9th, 2021Tranquillus
VERENGA Kubhadharwa zororo, RTT, CDD: izvo izvo waunoshandira anogona kuita kusvika Chikumi 30, 2021
Senior Executive: mhando inoenderana necumulative zviyero zvitatu
Kuenda kune yakavandudzwa Macron bhonasi ye "yechipiri mutsara" vashandi?
ANSSI inoyambira nezve Log4Shell chengetedzo kutyorwa